सिके राउतसँगको सहमतिपत्र विदेशबाट आएको डा. सुरेन्द्र केसीको आरोप
आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ ०६:२८:४१
फागुन २७, काठमाडौँ । सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त राउत (सिके) बीच भएको ११ बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट नेपाली भूमिभन्दा बाहिरबाटै आएको आरोप राजनीतिक विश्लेषक डा। सुरेन्द्र केसीले लगाएका छन् ।
राजधानीमा सोमबार (आज) आयोजना गरेको अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै डा. केसीले भने, सहमती विदेशीले अंग्रेजीमा लेखेको हुनाले त्यसको ड्राफ्ट नेपालीमा उल्था गर्दा भाषामा गडबडी भएको हो ।
ुभाष हुबहु गर्न खोज्दा शब्दको उल्थामा फरक परेको हो,’ केसीले भने, ‘सहमति सरकार र राउत पक्षले गरेको भए प्रष्ट भाषामा आउँथ्यो । अर्काले गरेको कामको पछि लाग्दा सरकार समस्यामा परेको हो ।’
केसीले विगतमा भएका महत्वपूर्ण सहमति पनि विदेशी भूमिमा भएकाले शंका गर्ने आधार धेरै भएको जिकिर गरे । उनले शब्दलाई जसले जसरी व्याख्या गरेपनि ‘जनअभिमत’ भन्नाले जनमतसंग्रह नै हुने ठोकुवा गरे । केसीले ११ बुँदे सहमति नेपाल र नेपालीको अहितमा भएकाले यसको वास्तविकताबारे सरकारले समयमै जवाफ दिनुपर्ने वेला आएको तर्क गरे ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, फाल्गुन २७, २०७५, ०६:०३:००